トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela namagagasi ROM isikhathi ecasukile
Ngo wamakhaza pachinko, ingabe ucabanga ukuthi ngokuvamile platform besacasukile engcono. Uma kungenjalo, ngoba kwakuzosho ukuthi kumelwe babe akaphinde asibalele yokuthengisa of pachinko emakhazeni. Ngo, njengoba izinyathelo ababezibheka of enjalo pachinko eshintsha, sizobe ukwethula indlela ukubona ngokusebenzisa ithebula ecasukile izici.
ngeke nje ngokushesha ngabona ukuthi uma ubheka.
ithebula ecasukile kwesici engcono kakhulu yokuthi umlutha kwanoma yini kuba ezijulile. Lapho izikhathi 1000 nelesabekayo Itholakala Zara futhi iyomiswa umlutha izikhathi 2,000. Ngaphakathi ROM ngesikhathi Esimweni esinjalo, ukukhuluma isibonelo, kuyisimo sokungazi, ezifana roulette bekulokhu emuva naphambili ngokuphindaphindiwe imodi ecasukile.
futhi ukubuyela ekuphileni okuvamile, futhi ngokuvamile ingaba isikhathi eside. isikhathi Ecasulwe, kuyoba yokungakhokhi zombuso kuwo wonke, ngicabanga ukuthi-ke kulula ukuyiqonda. Kube kahle ngesikhathi esinjalo, wukuthi isibalo Ukuvela zokukhiqiza is kakhulu ziyancipha.
esikhathini okuvamile, kodwa ukukhiqizwa njalo ngeke uvele, ukuze isikhathi ecasukile, ukukhiqizwa ngokwaso kuya kuba nzima ukushiya. Umphumela it off, Kwaphuma ukufinyelela ukuboniswa, sizosheshe ukuqeda ngaphandle ukuthuthukiswa.
Ngaphezu kwalokho, uma uye ekugcineni ivaliwe nangempela ngayibamba, noma abe ukuphela kwelinye olulodwa, kuhloswe ukuba noma abe ukuphela e wokudonsa emuva akukaze futhi ematfuba ukushintshashintsha ngisho kanye amahora emifushane ukusebenza. Khona-ke, it kuyogwinywa konke eside elindelwe yayo yaphuma ebhokisini, futhi uye waba utshalomali kunesidingo. Kusuka lapho, ngeke kwenzeke mjikelezo noma umlutha iqala. Kuzoba izici ukugeleza isikhathi ecasukile.
e sasemakhazeni pachinko, ngoba ithebula enjalo esibi ngokuvamile okungcono, nami ngicabanga eningi umuzwa omuhle kakhulu uke hit esisekelweni ezinjalo. Nokho, lokhu akwenzi mqondo ukwazi ngemva ngifika. ukugeleza Worst ulinde, yisifo isigaba ukugeleza enjalo selitholakele ukuba ngcono ukwazi ngaphambi kokuthi bashaye. Ngo
yayo Lokhu kuwusizo ukuba idatha robo nedatha esiphikisayo. idatha uviniga Bheka isibani igrafu kanye ngokukhanyayo ecasukile-ukuphila kungaba azimisele. Idatha ye yitafula eliphambi endaweni enjalo isikhathi ukuwa, igrafu, ngicabanga ukuthi kude ngezansi line isikhungo. Njengoba
ukuphila ecasukile isibe sibi jackpot Amathuba wetafula, zama ukuhlola ndawonye. Ngaphezu kwalokho, endaweni yesikhulumi eziye beveza izici ezifana ecasukile-ukuphila, zikhona izikhathi lapho uke ngenhloso walulama umshini e sasemakhazeni pachinko.
noma nje has kuphela esezithela ukugeleza, ngicabanga ukuthi kahle ukunquma kunesidingo ukuthi ngenxa yokuthi wenza umshini yokutakula. Nokho, asilandelwanga kakhulu yi-ukuhumusha isikhathi ecasukile.
eziye beveza isigaba disorder ezifana izici, ecaleni kuye kwalandelwa kwezinsuku ezimbalwa, futhi wayekubheka ukuqhubeka bayeke ukuba impilo evamile futhi inkathi evumayo. Uma ube kuyanda mkhuba kancane igrafu kancane, ngicabanga ukuthi ezandleni ezithola ithuba lokuzwa indlela zama hit kancane ukuzama. Uma kukhona
ukubona ngokusebenzisa ngokuqinile umngcele kwesikhathi enamandla evela ecasukile-ukuphila ubuchwepheshe, Ubani Kungenzeka futhi ukuthi umuntu oyedwa kuphela zidwedwe Winning esiqhingini isiphetho ukuba ngimbuze ebanzi ukuvula awuboni. Platform, okuyinto langena ngokucacile esikhathini eqinile, ngoba nathi ibuke imbangi, akukwazi ngakho kalula. Ukusho ukuthi
, saqala kunzima kakhulu ukuba ubone ngokusebenzisa umngcele kwesikhathi eqinile enkathini ngokuzumayo ecasukile, nengozi kuhle okusezingeni eliphezulu. Unalokho engqondweni, kuyoba etafuleni sicabanga ukuthi isikhathi namandla futhi ifomu okuqhubekayo zamanje, kungcono ukuze uthole lapho ithuba kuphakama ukuthi ikhasimende base kuthiwa ezazijikeleziswa ibhalansi uzinzile. Ngicabanga ukuthi kukhona isidingo ukuthola kahle. Nokho, asilandelwanga kakhulu yi-ukuhumusha isikhathi ecasukile.
, saqala kunzima kakhulu ukuba ubone ngokusebenzisa umngcele kwesikhathi eqinile enkathini ngokuzumayo ecasukile, nengozi kuhle okusezingeni eliphezulu. Unalokho engqondweni, kuyoba etafuleni sicabanga ukuthi isikhathi namandla futhi ifomu okuqhubekayo zamanje, kungcono ukuze uthole lapho ithuba kuphakama ukuthi ikhasimende base kuthiwa ezazijikeleziswa ibhalansi uzinzile.